यस्ता छन् ब्रोकाउली खानुका फाइदैफाइदा जान्नुहोस् ! - Nawalpur Dainik
यस्ता छन् ब्रोकाउली खानुका फाइदैफाइदा जान्नुहोस् !
काठमाडौं । प्राय हामीले ब्रोकाउलीको तरकारी खाने गर्दछौं । ब्रोकाउलीको तरकारी खाँदा जति मिठो हुन्छ त्यतिकै स्वस्थ्यकर पनि मानिन्छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार ब्रोकाउली तरकारीको रुपमा मात्र होइन औषधिको रुपमा पनि उपयोग गर्न सकिने देखिएको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको प्रतिवेदन अनुसार ब्रोकाउलीको तरकारी नियमित खानसके मुटुसँग सम्बन्धित रोग न्यूनीकरण हुने, क्यान्सर हुने खतरा कम हुने, मानिसलाई डिप्रेसनको खतराबाट जोगाउने लगायतका तथ्य प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
ब्रोकाउली लोकप्रिय तरकारी मध्येको एक हो ब्रोकाउली । यो धेरै गुणहरुले भरिएको हुन्छ । यसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, आइरन, भिटामिन ए, सी र अन्य पोषक तत्वहरु अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ । यसमा नुनिलो पदार्थ पनि पाइन्छ । जसले शरीरमा भएको ग्लुकोजको मात्रालाई सन्तुलित बनाई राख्नमा सहयोग गर्छ । ब्रोकाउलीलाई तपाई विभिन्न तरिकाले खानामा समावेश गर्न सक्नु हुन्छ ।जस्तै सलाद, ब्रोकाउलीको सूप अथवा तरकारी बनाएर पनि खान सकिन्छ । साथै यसलाई हल्का वाफमा उसिनेर खान सकिन्छ ।
Prevमकै खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा- क्यान्सरको समेत खतरा कम हुन्छ !
Nextनायिका स्वस्तिमा खड्का साउथ इण्डियन फिल्ममा धमका मचाउदै तस्बिर सहित